स्वास्थ्यमा १५६ जना सहसचिवको समायोजन टुंगियो ! – Public Health Concern(PHC)
काठमाडौँ, २६ बैशाख । स्वास्थ्य समूहको १५६ जना सहसचिवहरुको नयाँ समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसलाई गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको बताइएको छ ।
यद्धपी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यस सम्वन्धी औपचारिक पत्र भने आइसकेको छैन ।
स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले सहसचिवको समायोजन भएको अपुष्ट खबर सुनेपनि औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताइन । उनले समायोजन सम्वन्धी पत्र आइसकेपछि पदस्थापन प्रक्रिया शुरु हुने बताइन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सहसचिवहरुको निर्णयको बारेमा आज जानकारी आउनसक्ने बताए ।
यसअघि २१ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय भन्दै १५० जना सहसचिवको विवरण प्रकाशित भइसकेको थियो । तर त्यसबीचमा पाँचवटा अस्पताल संघ मातहतमा राख्ने निर्णय र केहीको समायोजन प्रक्रिया विग्रिएको भनिएपछि सो समायोजन स्थगित भएको थियो । सन्दर्भ सामाग्री
विदेशमा भएका र अध्ययन विदामा रहेका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ?
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका र अध्ययन विदामा रहेका सबै कर्मचारीले अरु कर्मचारी सरह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सफ्टवेयरमा अनलाइन फाराम भरी समायोजन प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागि हुनुपर्ने छ। विदेशबाट फर्किएपछि वा अध्ययन विदा सकिएपछि अध्यादेशमा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन भएको तह र निकायमा हाजिर हुनुपर्नेछ।
Tags: health infoRecently Happen In HealthSwaasthya Samaayojan
स्वास्थ्य सेवाका ऐन तथा नियमावालिहरूको संग्रह !